1. Inona no atao hoe Sermorelin Acetate?
2. Ny fomba fiasan'ny Action-Sermorelin Acetate
3. Ny tombontsoa amin'ny fampidirana Sermorelin Acetate
4. Ahoana no fomba ahafahantsika mampiasa Acetate sermorelin?
5. Rahoviana isika no hahita ny valin'ny Sermorelin Acetate?
7. Ny toerana tsara indrindra hividianana Sermorelin Acetate
Ny sermorelin acetate dia fikambanana ara-pitsaboana izay mitovy amin'ny hormone hormone releases hormone (GHRH).
Ny acetate Sermorelin dia fantatra noho ny fahaizany manandratra ny androbe amin'ny gripa mba hamokarana sy hormones hendrina kokoa.
Sermorelin Acetate (86168-78-7) dia bio-identical synthetic hormonal sequence peptide which is made of 29 amino acids. Ny FDA dia nankasitraka ity fitsaboana ity ho an'ny fitsaboana ny zaza, fa marary maro manerana an'izao tontolo izao mampiasa Sermorelin Acetate ny marika mba hampitombo ny hormone ny hormone amin'ny marary olon-dehibe.
Tsy toy ny fanafody HGH hafa, ny Sermorelin Acetate dia azo ampiasaina amin'ny marika. Etsy ankilany kosa dia sarotra ambany kokoa ny saram-bolana raha oharina amin'ireo zava-mahadomelina mitovy amin'izany. Ity zava-mahadomelina ity koa dia natao hampiasaina amin'ny alina ary tokony halaina antsasak'adiny alohan'ny mialoha na aorian'ny fisakafoanana. Ny fampidirana Sermorelin Acetate amin'ny alina dia mitazona ny fatran'ny voa voajanahary amin'ny hormone mitombo, ary mamporisika ny vavoninao amin'ny ratra mahafaty. Etsy ankilany, ny Sermorelin Acetate dia misy amin'ny endrika roa, izay Oral Sermorelin fanatsarana sy ny endrika tsy azo ampiasaina.
Sermorelin miasa amin'ny fanentanana ny famokarana hormonina fampiroboroboana ao amin'ny vatana ary ankapobeny ho an'ny ankizy manana tsy fahampian'ny hormone. Na dia ankatoavin'ny fampiasana zaza tsy ampy taona aza ny zava-mahadomelina dia nahatsikaritra ihany koa ny dokotera fa ilaina sy mahasoa ihany koa ny Sermorelin rehefa voatokana ho an'ny olon-dehibe. Ohatra, olon-dehibe sasany Miady amin'ny sermorelin raha ny hafa dia mahazo aina amin'ny Sermorelin sy ny fahavoazana. Ny zava-mahadomelina dia manaisotra ny voan'ny pitipoa mba hamokarana hormonina mitombo kokoa ao amin'ny vatanao.
Ny GHRH dia peptide izay misy ny asidra amino 29 izay misy ao amin'ny hormones mitombo. Ireo asid amino ireo no mahomby indrindra amin'ny GHRH. Amin'ny ankapobeny, amin'ny vanim-potoanan'ny olona, ​​ny hormones mitombo amin'ny sehatry ny hôpitaly misarona ary ny ankamaroan'ny fikarohana nataon'ireo manam-pahaizana momba ny fitsaboana dia nanaporofo fa i Sermorelin dia afaka mamerina indray ny haavon'ny hormone amin'ny vatanao amin'ny zatovo, amin'ny fampiakarana ny IGF-1 ( Tahaka ny fitomboan'ny tsimokaretina VIH / SIDA 1).
Na izany aza, ny fomba tsara indrindra hahazoana ny sermorelin acetate tombontsoa dia ny mandray ny dosise tsara ary manaraka ny torolàlana dokotera anao. Ny fifehezana ny zava-mahadomelina dia mety hitarika ho amin'ny fihoaram-pefy tsy mety hitranga na koa hanaiky anao amin'ny fandrosoana ara-pahasalamana. Ny fanadinoana koa dia handà anao ny fahafahana hankafy ny tombontsoa azon'i Sermorelin. Tahaka ny ahafahanao mivezivezy mora foana amin'ny zava-mahadomelina avy amin'ny sehatra an-tserasera na avy amin'ny pharmacy aza, dia aza manomboka maka fanafody raha tsy mandalo fitsaboana.
Na dia mandoa ny sermorelin aza dia ambany noho ny fanafody mitovy amin'izany eny an-tsena, dia manome vokatra tsara izany. Misy samihafa Sermorelin Acetate valiny izay mpampiasa na marary mandray azy tsara ary manaraka ny torolalan'ny dokotera. Iray amin'ireo tombony tena manan-danja amin'ny fampiasana ity zava-mahadomelina ity dia afaka misafidy ny endrika dosage izay mahazo aina aminao. Misy ny doka am-bava raha tsy afa-po amin'ny injections ianao ary afaka mandeha ihany koa ny dosage mety, fa ny vokatra dia mitovy. Ny fanamarihana Sermorelin Acetate ihany koa dia toerana tsara indrindra hijerena ny tombontsoa azon'ny mpampiasa sasany aorian'ny fisotroana ity zava-mahadomelina ity. Misy tombony hafa manan-danja hafa izay tianao haka ity zava-mahadomelina ity, ary tafiditra amin'izany izy ireo:
★ Sermorelin Acetate ho an'ny ady amin'ny fihenan'ny zokiolona
Io zava-mahadomelina io dia heverina ho anisan'ny fanafody fitsaboana tsara indrindra amin'ny tsena, satria manampy amin'ny fampiroboroboana ny sela sy simban'ny sela ao amin'ny vatanao. Izany dia mitazona ny hoditrao amin'ny toetry ny tsara sy ny tanora, ka mampihena ny fiantraikany amin'ny fahanterana toy ny andalana tsara eo amin'ny hoditra sy ny fiantohana marefo. Ny haavon'ny hormone mitombo dia miteraka miova eo amin'ny endriny ary fantatra amin'ny maha-antony lehibe indrindra amin'ny fanodinana na hoditra sy ketrona. Majority of the Sermorelin Acetate reviews dia manondro fa maro ny mpampiasa zava-mahadomelina no faly amin'ny vokatra bebe kokoa amin'ny fanesorana ireo famantarana marary.
Olona an-tapitrisany eran-tany Fighting Aging Miaraka amin'i Sermorelin sy ny vokatra dia tena mahatalanjona. Sermorelin koa dia mamerina ny fikarakarana ara-dalàna ny vatanao amin'ny alàlan'ny fanamafisana ny olana rehetra vokatry ny tsy fahampian'ny HGH. Ny fahafahan'ny zava-mahadomelina hanombohana ny valin'ny vatana mahazatra sy ny rafitra fiarovana izay mamaly ny haavon'ny HGH dia ahafahan'ny mpampiasa manatsara ny endrik'izy ireo ary manamaivana ny famantarana ny fahanterana.
★ Sermorelin Acetate ho an'ny fahazaran-dratsy
Ny fikarohana samihafa nataon'ny manam-pahaizana samihafa dia nanamafy fa ny olon-dehibe manantitrantitra ny fahazaran-drà ary ny lanjan'ny lanjany dia mety hanana hormone ambany ambany noho ireo manana lanjany ara-pahasalamana. Raha ny marina dia maro no tia an'i Sermorelin sy levitra dosage hanamafisana ny lanjany. Ny acetate Sermorelin dia hita fa ilay zava-mahadomelina mahasoa hanampy ireo olona be loatra izay mandany lanja maivana amin'ny alàlan'ny fanentanana ny famokarana hormonina ao amin'ny vatana. Ny zava-mahadomelina koa dia mifandray amin'ny fitomboan'ny hormonina mitombo ao amin'ny vatana, izay miteraka ny fivoaran'ny taova sy ny hozatra ary ny fihenan'ny tavy. Raha mila fampahalalana bebe kokoa, miangavy anao amin'ny fanafody mampijaly anao na mpitsabo aretin-koditra.
★ Tombontsoa hafa avy amin'ny Sermorelin Acetate
Misy ihany koa tombontsoa hafa izay ankafizinao amin'ny fakana ity zava-mahadomelina ity, ary ireto manaraka ireto;
Density mineritiora; Sermorelin studies dia nanaporofo fa ny tsy fahampian'ny HGH amin'ny olon-dehibe dia mitarika ho amin'ny fihenan'ny taova amin'ny taolana, izay mampitombo ny mety hitera-doza amin'ny osteoporose. Ny fampidirana Sermorelin momba ny 12 volana na mihoatra dia afaka manatsara ny haavon'ny taolana sy mampihena ny sakana amin'ny fivoaran'ny osteoporose.
Manamafy hery hery; Noho ny fanovana ataon'ity zava-mahadomelina ity ao amin'ny vatanao, amin'ny fanatsarana ny famokarana hormonina mitombo, izay mitarika ho amin'ny fanorenana hozatra dia mampitombo ny herin'ny tebiteby. Hisy vokatra tsara kokoa aorian'ny fitsaboana anao mandritra ny volana 12.
Ampitomboy ny firaisana ara-nofo: Matetika ny olona voan'ny hormone mitombo kely dia manana olana amin'ny libido noho ny hakamoana ambany. Ny ankamaroan'ny olon-dehibe izay nampiasa ny acetate Sermorelin dia nitatitra fanatsaràna tamin'ny fiara fitadiavam-bady ary koa ny famahana vahaolana ho an'ny ejaculation vao haingana.
Ampitomboy ny hatevin'ny hoditra; Ny fihenan'ny collagen hoditra sy ny haavony dia vokatry ny hormone hormonina mitombo ao amin'ny vatanao. Soa ihany fa ny Sermorelin Acetate no fitsaboana tsara indrindra hamahana ireo zava-manan'aina rehetra ireo.
Metabolism; Ny tsy fahampian'ny hormone mitombo ao amin'ny vatanao dia miteraka kely amin'ny fitsaboana ny metabolisma, ary ny fitsaboana Sermorelin Acetate dia mety hamadika io toe-javatra io. Ny fitsaboana ny HCGH dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fampitomboana ny proteinina, manalasalana ny metabolisma karbohydra, ary hampitombo ny fatran'ny otrikaretina ary hampihenana ny kolesterola ratsy. Ny fiantraikan'ny metabolisma amin'ny fanatsarana ny HCG dia mahatonga ny fahasalamana sy ny fiasan'ny vatana.
Ny sasany amin'ireo tombontsoa hafa azon'i Sermorelin Acetate dia ahitana; mitombo ny fiaretana, manatsara ny vatana, manatsara ny fahasitranana amin'ny ratra, manatsara ny hery fiarovana ary ny fahasalaman'ny foza, ary ny torimaso tsara.
Ny fampiasana ny zava-mahadomelina mihoatra noho izany SErôretelin Acetate dia tokony ho tarihin'ny dokotera aorian'ny fitsapana fitsaboana. Indraindray ny fanafody voalaza ao amin'ilay marika dia mety ho kely na kely, arakaraka ny habetsahan'ny fepetra ilainao hatao. Ny dokotera àry dia tokony hametraka dosie mety sy tsingerina mba hahazoana vokatra tsara kokoa. Ny dosage dia tena miankina amin'ny zavatra ilainao hahatratrarana ohatra Sermorelin sy fatiantoka Ny dosage dia mety tsy mitovy amin'ny ady amin'ny ady amin'ny sermorelin dose. Ataovy izay hahazoana antoka fa manaraka ny torolalan'ny dokotera ianao ary manangona ny alahelonao aminy alohan'ny hanombohanao ny dosage Sermorelin Acetate.
Amin'ny ankapobeny, ny Sermorelin Acetate dia entina amin'ny alalan'ny fampidirana ao an-tokantranonao, ny biraon'ny dokotera, na any amin'ny toeram-pitsaboana akaiky indrindra aza. Na izany aza, ny medikaly dia afaka mampiofana anao amin'ny fomba hifehezana ny tenanao ao an-trano fa tsy fitsidihana tsy tapaka any amin'ny toeram-pitsaboana. Na izany aza, rehefa manisy dingana ny dosage dia ataovy azo antoka fa manaraka ny fomba fitsaboana araka ny tokony ho izy ianao araka izay ampianarin'ny mpitsabo. Mety hampisy fiantraikany mahery vaika be loatra ny tsy fahampian-tsakafo na ny tsy fetezana loatra, izay tsy antenainao rehefa mitondra Sermorelin Acetate. Tsarovy koa ny mandinika ireto manaraka ireto rehefa mandray ny fanafody;
Tsikino raha ny mason'ny Sermorelin Acetate dia marefo na misy ampahany kely, raha izany dia aza mampiasa izany. Etsy ankilany, raha simbana na voaka ny vovobony, dia mialà amin'ny zava-mahadomelina ary mampahafantatra avy hatrany ny dokotera mba hahazo fitarihana.
Aza mampihorohoro ny acetate Sermorelin rehefa mampifangaro azy.
Alaharo antoka fa ianao mametraka acetate Sermorelin taorian'ny nifindrana. Azonao atao ihany koa ny manaisotra ny fanafody tsy ampiasaina.
Raha toa ka mampiasa fampitomboana hormone hafa ianao dia tokony hajanonao haka izany farafaharatsiny herinandro mialohan'ny hanombohana ny dosage azonao ao Sermorelin. Atao daholo ny fanontanianao na ny alahelonao amin'ny dokotera na pharmacista ary ampahafantaro azy koa raha misy fanafody mitovy na fahasalamana hafa. Ho mora aminao ny dokotera hanome torohevitra tsara, satria misy fanafody maromaro afaka manelingelina ny tolotra Sermorelin ao amin'ny vatanao.
Ataovy hatrany, ataovy izay hahazoana ny fanafody, ny fitsangatsanganana avy amin'ny ankizy ary ny lavitra ny biby fiompinao. Aza mampiasa indray ny fanjaitra na zavatra hafa ampiasainao amin'ny fitantanana ny Sermorelin dosage. Ny lafiny iray manan-danja hafa dia ny fomba famoahana ny vokatra aorian'ny fampiasana azy. Miangavy anao amin'ny dokoteranao, mba hanoro hevitra anao momba ny fitsipika tsara indrindra sy eo an-toerana mba handraisana ireo vokatra fanafody ao amin'ny faritra misy anao.
Raha sendra tsy mahazo dosie Sermorelin Acetate ianao, dia ataovy izay azonao atao ao anatin'ny fotoana fohy. Na izany aza, raha tsikaritrareo fa tara ny fotoana fohy amin'ny dosage manaraka, dia azonao atao ny misintona ny dosage tsy ampy ary mandeha any amin'ny manaraka. Aza mandray dôlea indroa mba hanonerana ny iray tsy hita hatramin'io dia ho mavesatra loatra ary mety hitarika ho amin'ny fihenan'ny vokatra. Azonao atao ihany koa ny mampahafantatra ny dokotera anao mba hanome toro-hevitra anao rehefa voamarikao fa tsy nahavita ny dosage ianao.
Ankoatra izany, ho an'ny Sermorelin sy ny fihenam-bidy dia mety ho hevitra tsara raha manaraka ny dosage miaraka amin'ny sakafo sy ny fiasana.
(1) Inona no endriky ny Sermorelin Acetate?
Ity zava-mahadomelina ity dia misy endrika roa fototra, izay ahitana ny fanindroany sy ny fanomanana Oral, fa samy mamokatra vokatra mitovy amin'izany koa izy ireo. Ireo endriny dia ahitana;
♦ Fomba nampidirina an-tsokosoko - Izany no endrika injectable amin'ny Acetate Sermorelin izay midika fa tokony halefa amin'ny alalan'ny injections fotsiny izy io. Azonao atao ny mampiditra anao na manomana fitsidihana tsy tapaka any amin'ny toeram-pitsaboana misy anao amin'ny fitsaboana. Amin'ny tranga maro, ny mpitsabo anao dia hanofana anao amin'ny fomba hanosehana ny tenanao any an-trano satria tsy maintsy hitondra ny zava-mahadomelina mandritra ny volana 12 na mihoatra.
♦ Fanomanana am-bava - Ity ny formul de Sermorelin Oral, izay midika eto fa tsy voatery hiaritra fanaintainana ianao. Azonao atao ny mifidy ny endrika dosage tsara indrindra ho anao, arakaraka ny azonao atao. Raha tsy manara-penitra ianao, dia azonao atao foana ny mangataka ny dokotera mba hiteny ny dosage am-bava. Tadidio fa tsy azonao atao ny maka ny dray am-bava sy ny dity amin'ny fotoana iray.
(2) Alohan'ny hampiasana; inona no tokony ho fantatrao?
Mila mitandrina tsara ianao rehefa mitondra an'io zava-mahadomelina hormonina mamoaka io, raha toa ka tsy voatery araka ny tokony ho izy dia mety hitondra fiantraikany mahery vaika. Aza mividy sermorelin acetate avy amin'ny pharmacy na eny amin'ny sehatra an-tserasera ary manomboa mampiasa izany raha tsy misy toro-hevitra avy amin'ny dokotera. Tadidio fa samy hafa ny vatan'olombelona ary noho ny fiasan'ny zava-mahadomelina ho an'ny namanao, tsy mahazatra anao izany fa hiaraka aminao tsara. Izany no mahatonga ny fanadihadiana ara-pahasalamana, ary mamela ny fahasalaman'ny fahasalamanao hametraka ny dosia mety aminao. Ampahafantaro ny dokotera, raha misy fanafody hafa ianao satria mety tsy dia tsara loatra amin'ny fanafody sermorelin Acetate ny fanafody sasany. Ny sasany amin'ireo fepetra ara-pahasalamana tokony hampahafantarinao amin'ny dokotera raha toa ianao ka mampiditra azy;
Raha toa ianao mikasa ny ho bevohoka na efa bevohoka na dia efa mampinono aza. Izany dia hanampy ny dokotera hamolavola ny tahan'ny tsara indrindra ho anao mba hahazoana antoka fa tsy misy fiantraikany eo amin'ny foetus na ny zaza ny fanafody.
Raha toa ianao ka mandray fanafody tsy mamaritra na dokotera, sakafo fanampiny, na raha manomana fiomanana amin'ny herisetra ianao. Ny zava-mahadomelina sasany dia mety tsy mahomby amin'ny Sermorelin Acetate, ary tsara ny mampahafantatra ny mpitsabo anao alohan'ny hanombohanao ny fampidirana na ny dosage am-bava.
Raha tsy mahazaka sakafo, fanafody, na zavatra hafa ianao.
Lazao ihany koa ny dokoteranao raha manana atidoha na maratra amin'ny loha ianao ary aretina efa nodidiana na efa ela ianao.
Ny zava-mahadomelina sasany dia mety mifandray tsara amin'ny Sermorelin Acetate, raha ny hafa kosa mety hampidina ny fahombiazan'ny zava-mahadomelina. Noho izany, araka ny voalaza tetsy aloha, dia tsara ny mampahafantatra amin'ny dokoteranao ny fanafody hafa rehetra izay raisinao hanoro anao araka izany. Ny dokotera sasantsasany dia mety hanoro hevitra anao mba hamaranao ny fanafody ampiasainao amin'izao fotoana izao ary manomboka mandray Sermorelin Acetate na raha tsy misy vokany dia azonao atao ny mihinana fanafody roa indray mandeha. Aza misalasala mampahafantatra ny mpitsabo anao raha mampiasa ireto fanafody manaraka ireto ianao;
Ireo hemôglizinina siklaikaxygenase, toy ny indometacin sy aspirine, glucocorticoids toy ny prednisone, insuline, na fanafody izay mety hampidina ny siramamy amin'ny vatanao toy ny Propylthiouracil. Ny hafa dia ahitana somatostatin misy zava-mahadomelina izay mamoaka somatostatin toy ny levodopa, ary clonidine hatramin'ny nanakanany ny herin'ny Sermorelin ary mety tsy hahatratra ny fara-tampony Sermorelin Acetate valiny na dia efa nizaka fanafody nandritra ny fotoana ela aza.
Ny lisitr'ireo zava-mahadomelina izay mety hisy fiantraikany amin'ny fahafahan'ny Sermorelin Acetate miasa ao amin'ny vatanao dia tena lava, ary izany no antony maha-zava-dehibe ny mampahafantatra ny dokotera amin'ny zava-mahadomelina azonao hahazoana vokatra tsara kokoa. Indraindray, na dia ny fanafody izay heverinao fa tsy misy fiantraikany aza, toy ny fanafody mampinono dia mety hitondra voka-dratsy hafa. Aza mieritreritra na inona na inona raha mila mahatsapa ny vokatra tsara sy avo indrindra ianao. Mba hiarovana ihany koa dia ataovy azo antoka fa tafiditra amin'ny dokotera ianao mandritra ny dingana fanafody. Ny fitsaboana ara-pahasalamana dia mitana andraikitra manan-danja alohan'ny, mandritra sy aorian'ny famitana ny tsingerin'ny dosage.
Ankoatra izany, ny fitsaboana amin'ny laboratoara dia azon'ny dokotera atao mba hanaraha-maso ny fivontosan'ny hormone, ny vokany ary ny fandrosoana. Ataovy azo antoka fa manaja ny fanendrena rehetra an'ny dokotera ianao mba hahazoana tombontsoa lehibe indrindra amin'ny Sermorelin Acetate. Ho an'ny vehivavy, raha tsikaritrareo fa bevohoka ianao mandritra ny dosage, dia lazao avy hatrany ilay dokotera. Na dia tsy mazava loatra aza hoe inona no azon'ilay zava-mahadomelina atao amin'ny zanakao na ny foetus, dia tsy azo antoka ny fitazonana ny sermorelin Acetate rehefa mampinono na miteraka. Na izany aza, dia aorian'ny fitsaboana ara-pitsaboana rehefa afaka mitarika anao ny dokotera. Aza mitandrina ny fanafody raha ao anatin'io toe-javatra io nefa tsy mampahafantatra ny medikao.
Samy miafina foana ny HGH sy ny IGF ary tsy mitandrina. Noho izany, mety tsy ampy ny fitsapana sy ny fanadihadiana ra iray mba hamaritana raha efa nanomboka niasa ny Acetate Sermorelin. Ny ankamaroan'ny dokotera milaza ny Sermorelin Acetate na fanafody mitovy amin'izany dia manombana ny fahombiazan'ny zava-mahadomelina amin'ny alalan'ny soritr'aretina, izay fandinihana ny soritr'aretina handinihana ny soa azo avy amin'ny fanafody, ny fisehoana ara-batana ary ny fandinihan-dra.
Hanomboka hahazo traikefa Sermorelin Acetate ianao rehefa manomboka mivoatra sy matory tsara rehefa afaka fito herinandro ny fampiasanao ny dosage. Na izany aza, dia mora foana ny mahita ireo olona manana fahasarotana amin'ny fitazonana torimaso tsara. Hivoatra ihany koa ny haavon'ny angovo, ary hihatsara ny toe-tsainao.
Matetika, marary maro no manomboka mitatitra fiovana lehibe eo amin'ny vatana taorian'ny telo hatramin'ny enim-bolana amin'ny fitsaboana Sermorelin Acetate indrindra indrindra ny Sermorelin sy levitra. Ny sasany amin'ireo vokatra tsara indrindra hita eo amin'ny hormonina mitombo ao amin'ny vatana dia ahitana ny fivelaran'ny masirasira moka sy ny fampivoarana tsara ny fahasalaman'ny vatana. Ireo olon-dehibe izay miady amin'ny fahanterana amin'ny sermorelin dia mety hanomboka hiaina ny valiny mandritra ny volana voalohany 3.
Ho an'ny vokatra tsara kokoa, mila mampiditra tsy tapaka an'i Sermorelin ianao rehefa tapaka haingana amin'ny rafitry ny vatanao. Ny hetsiky ny zava-mahadomelina dia miankina amin'ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra eo amin'ny fizotry ny zavamaniry izay mitarika amin'ny fampivoarana ny vokatra hormonina mitombo. Ankoatra izany, miankina amin'ny rafitry ny vatanao ny manomboka mahita ny valin'ny Sermorelin Acetate aorian'ny volana 3 na 6 satria mila fotoana hanaovana ny haitao hormonina hiasa sy hamita ny vokatra tadiavinao.
Tsy misy vanim-potoana mazava izay tokony horaisina amin'ny Sermorelin Acetate, fa tokony hampihena na tsy hijanona intsony ny zava-mahadomelina aorian'ny hahatratraranao ny hormonina hormonina tsara indrindra. Izany no mahatonga ny fanadinam-pandaharam-pianarana Lab tsy maintsy atao mba hanaraha-maso ny hormone. Ny dokotera no ho olona mety hampihena na hanoro hevitra anao hampitsahatra ny fampiasana azy rehefa avy nandinika ny fitsaboana. Ny marary sasany dia mandray ny Acetate Sermorelin mandritra ny volana 12 na mihoatra mialoha ny hahatongavany amin'ny ambaratonga hormone tsara indrindra.
Ny ankamaroan'ny zava-mahadomelina eny an-tsena raha tsy ny rehetra no manana fiantraikany hafa izay mety ho kely na henjana raha tsy ampiasaina tsara ny fanafody. Ny fijerena ny Sermorelin Acetate dia manamarina fa ny sasany amin'ireo mpampiasa dia mitatitra ny soritr'aretina hafa. Na izany aza, ireo marary izay manaraka ny torolàlana rehetra momba ny dosage, ary mandalo fitsaboana tsy tapaka, dia mitatitra ny vokatra fanampiny Sermorelin Acetate.
Azonao atao ny milaza ny vokatra efa azonao aorian'ny fakana ity hormonina mitondra fanafody ity. Ny vaovao tsara dia ny dokotera afaka manampy anao hifehezanao ny voka-dratsin'ny Sermorelin Acetate raha toa ka mampahafantatra azy amin'ny fotoana ianao. Ny sasany amin'ireo fihetsika iombonana mahazatra izay mety ho hitanao rehefa mandray ny dosage anao;
Ny aretin'andoha ary indraindray tsiro hafahafa ao am-bavanao.
Ny fanaintainana, ny fitenenana, ny fivoahana, na ny mavo manerana ny faritra famokarana.
ao amin'ny Sermorelin Acetate fanamarinana ireo mpampiasa sasany dia maneho ny fahadisoam-panantenany sy ny traikefa ratsy nananany tamin'ny zava-mahadomelina izay mahazatra raha tsy manaraka ny torolàlana amin'ny dosage. Ny voka-dratsin'ny tsy fahampian-tsakafo dia tsy hita intsony amin'ny fotoana, fa raha toa ka mijanona ela kokoa izy ireo noho ny efa nandrasana amin'ny dokotera mba hanampy anao hahazo vahaolana mialoha ny miharatsy. Na dia izany aza dia misy fiantraikany hafa mampiavaka azy rehefa avy niaina izy ireo, tokony hiantso ny dokotera avy hatrany ianao satria afaka mitondra any amin'ny fahasalamana mivaingana na tsy azo havaozina. Ireto lafiny roa ireto dia ahitana;
Fihetseham-po mahery vaika toy ny fantsom-panafody, ny fihenjanana, ny fahasarotan'ny aretina, ny tratra ny fahamendrehana, ny tarehiny, ny molotra, ny vava, na ny lelanao.
Tsy ireo sermorelin Acetate rehetra ireo no manantena fa ny sasany amin'izy ireo dia mety miankina amin'ny olona mitondra ny zava-mahadomelina. Mety ho tsara ny mampahafantatra amin'ny dokotera raha mahita zavatra tsy mahazatra ianao rehefa mandray ny dosage. Na dia izany aza, ny fomba tsara indrindra hiarovana ny tenanao amin'ireo vokatra hafa ireo dia ny mifikitra amin'ny torolàlana amin'ny dosage ary koa hanomezam-boninahitra ny fanendrena rehetra amin'ny dokotera amin'ny fitsaboana. Ny fanimbana dia antony lehibe hafa koa amin'ny ankamaroan'ny vokatra mampiavaka ny sermon Acetate. Noho izany, raha miahiahy ianao fa naka dosie bebe kokoa mihoatra noho izay nosoratana, antsoy fotsiny ny dokotera na tsidiho ny tobim-pitsaboana akaiky indrindra ho fanampiana anao.
Ny hany fomba hahazoana ny tsara indrindra Sermorelin Acetate valiny dia ny mba hahazoana antoka fa nividy izany avy amin'ny mpivarotra azo antoka sy mendri-piderana. Na mila ady amin'ny sermorelin na hifehezana ny lanjan-tsainao ianao, mahasoa ny zava-mahadomelina avo lenta anao ny vokatra faran'izay haingana sy haingana raha manaraka ny torolàlana momba ny dosage ianao. Maro ny mpivarotra sermorelin eny an-tsena, fa ny fahazoana ny tsara kosa dia tsy mora raha tsy mitandrina. Ny dokoteranao dia mety ho olona tsara indrindra hanampy anao hividy sermorelin acetate.
Azonao atao ihany koa ny mijery ireo mpivarotra an-tserasera, fa azonao antoka kosa Buy Sermorelin Acetate avy amin'ny mpamatsy mahay indrindra sy azo itokisana na mpamatsy Sermorelin. Aza mividy fanafody avy amin'ny pharmaceutique na mpivarotra an-tserasera manadala anao amin'ny aterineto satria ny sasany dia liana amin'ny fanaovana tombombarotra ary mety tsy hanana ny tsara indrindra Sermorelin izay manome antoka ny vokatra tsara.
Alohan'ny hividiananao Sermorelin Acetate, jereo ireo mpividy mpanjifa mba hanampy anao handray fanapahan-kevitra tsara. Amin'izao fotoana izao, izahay no mpanamboatra sy mpivarotra sermorelin Acetate tsara indrindra any amin'ny faritra. Manao tolotra maimaim-poana, maneran-tany ary izahay Sermorelin dia ambany ihany koa raha oharina amin'ny an'ny mpivarotra maro eny an-tsena. Mila mametraka ny baiko amin'ny alàlan'ny findainao smartphone, solosaina na tablety ianao, ary hamita ny vokatra ao anatin'ny fotoana fohy indrindra. Ny rindran-tsisinay dia misokatra foana 24 / 7, ary azonao antoka fa hahazo fanampiana haingana avy amin'ny ekipa mpividy mpanjifa izahay isaky ny mifandray aminay ianao. Ankoatra izany, tsidiho ny fanadihadian'ny Sermorelin Acetate ary ho hitanao fa afa-po amin'ny vokatray ny ankamaroan'ny mpanjifanay.
Manoro foana ny mpividy rehetra izahay mba hividy sermorelin acetate ao amin'ny tranokalanay saingy tsy ampiasaina raha tsy mandalo fitsaboana. Mpitsabo ihany ny dokotera tokony hametraka ny dosia mety ho an'ny toe-javatra misy anao ary manampy anao amin'ny fanaraha-maso ny vokatra hafa mety hipoitra rehefa mampiasa zava-mahadomelina toy ny Sermorelin Acetate. Atao daholo ny fanontanianao na ny alahelonao amin'ny mpitsabo anao, alohan'ny hanombohanao mampiasa ny vokatra ho anao mba hahafahanao mankafy ny tombontsoa azo avy amin'ny Sermorelin Acetate.
Janvier, S., Cheyns, K., Canfyn, M., Goscinny, S., De Spiegeleer, B., Vanhee, C., & Deconinck, E. (2018). Ny fametahana ny tsy fahampian-tsakafo amin'ireo zava-mahadomelina polypeptide tena mahatsikaiky matetika eo amin'ny tsenan'ny Belzika. Talanta, 188, 795-807.
Weber, C., Krug, O., Kamber, M., & Thevis, M. (2017). Ny fandalinana kalitao sy semiquantitative momba ny vokatra doping nosamborina tao amin'ny sisintany Swiss. Fampiasana vatana sy fampiasana diso, 52(6), 742-753.
Makimura, H., Feldpausch, MN, Stanley, TL, Sun, N., & Grinspoon, SK (2012). Ny fihenan'ny hormone mitombo amin'ny fiterahana dia mifandray amin'ny loko kely bitika LDL sy HDL. Clinical endocrinology, 76(2), 220-227.